Yekusona yevana furo bonde mwana anokambaira mat solid color puzzle eva mat baby non-slip mat
1. Isina chepfu, inharaunda ine hushamwari & inodzikisira
2. Hapana phthalate, heavy metal & lead free
3.Hazvina latex (kudzivirira allergy)
4.High kuomarara, hapana pungent hwema
5.Good kushinga (kudzivirira kukuvara)
Tiri kukanganisa mhando dzese dzakatsiga dzepasi pekushandisa zvekurovedza muviri uye zvemitambo.
Eva Foam Mat: Tatami Mat, Judo Mat, Karate Mat, Kickboxing Mat, wrestling bonde, Tumbling nepanhovo, jiu jitsu nepanhovo, tatami metiresi, MMA nepanhovo, bjj bonde, Tatami uriri, Inflatable jimunasitikisi bonde, Martial zvidhori, Matambo ekurovedza mat, Mateti ekusimudza huremu, Kumawadhi epamba, Matami pasi bonde.
Zvigadzirwa zvedu zvikuru ndezvese marudzi epasi pekugadzika, EVA akateedzana anosanganisira Evha Exervise mat, Tatami Mat, judo mat, teakwondo mat, judo mat, mma uye jjd bonde uye ese marudzi eEVA Puzzle inovhara bonde, saizi 1mx1m, 60cmx60cm uye 100-50mm ukobvu. Izvo zvinogona kushandiswa zvakanyanya muGym, Kumba uye imwe nharaunda yemitambo.
ISO, SGS, Reach, Fire Test Report, CNAS Bvunzo… nezvimwewo bvunzo dzakasiyana dzinovimbisa isu kupa zvakanakisa uye zvakachengeteka zvigadzirwa kune vatengi vedu nguva dzese.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, yedu fekitori inotibvumidza isu kuti tigadzirise chero vara uye chero mapatani aunoda!
Uye hapana MOQ yechero zvigadzirwa! Ndapota inzwa wakasununguka kutisangana nesu chero mibvunzo kana mutengo.
Kana shanyira webhusaiti yedu kune chinonakidza chigadzirwa.
UNOGARA UCHIGADZWA KUTI USHANYIKE YEDU Fekitori Chero Nguva KOSHA!
Pashure: Yakakora furo yekumonera matsi echikuru mudzidzi dhomitari yekurara tatami furo mateti asiri-ekutsvedza mateti
Zvadaro: Floor furo evha pasi bonde Yakakora furo pasi pasi bonde Huru suede pasi mat
Makara Rakajeka Floor Mats
Cushion Dambanemazwi Mat
Exercise Mat Dambanemazwi
Kusona mameti, kukambaira mats, evana ...
Vatambi veGamma vatambi vasina-kutsemuka vachikora murume ...
Yoga Mat Eva zvinhu Varume uye WomenR ...
Eva evelvet bonde mwana dambanemapeti kapeti furo suede ma ...
Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, AMP Mobile Yepasi Yekunze Exercise Mat, Floor Furo Rakajeka, Floor Mat Puzzle, Floor Furo Rakajeka Mat, Floor Puzzle Mat Cushion, Floor Rakajeka, Zvese Zvigadzirwa